कम्पनीलाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढ्छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता कम्पनीलाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढ्छौं
on: ९ बैशाख २०७५, आईतवार ०७:४५ अन्तरवार्ता
बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको बेलामा बीमा समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्सलाई अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगाउँदा कम्पनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । सीजीलाई बढी दाबी भुक्तानी गर्दा यस्तो समस्या भोगेको युनाइटेडले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ त ? प्रस्तुत छ, समसामयिक विषयमा युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :
बीमा समितिले युनाइटेडको अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगायो । कम्पनीले यसलाई कसरी लिएको छ ? यसले कम्पनीलाई कस्तो असर पारेको छ ?
बीमा समितिले अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगाउँदा कम्पनीलाई केही क्षति भएको छ नै । यद्यपि, हामीले समिति र उच्च अदालत पाटनको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै सहर्ष रूपमा कार्यान्वयनको पक्षमा पनि गएका छौं । समितिले निर्देशन दिएको दिनदेखि नै हामीले अग्नि बीमा कारोबार बन्द गरेका छौं । साथै, अन्य निर्देशनहरू पनि कार्यान्वयनको पथमा छन् । २०७१ चैत १७ गते बीमा समितिले अग्नि कारोबारमा रोक लगाएको थियो । त्यो दिन हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २०७२ जेठ ६ गतेका दिन अन्तिम फैसला नआएसम्म रोक फुकुवा गर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । अहिले अन्तिम फैसला आउँदा हामीले यस्तो समस्या भोग्नु परेको हो । कम्पनी जुन गतिमा अघि बढिरहेको थियो, त्यसबाट यसले केही सुस्त पारेको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको आदेशमा कम्पनीको बीमक संस्थागत सुशासन सुधार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यो अघिको ३ वर्ष हामीले संस्थागत सुशासन सुधारमा नै खर्चिएका छौं । त्यति बेला केही गलत कुरा भएका थिए । तर, आजको मितिमा त्यो अवस्था छैन । हामीले संस्थागत सुशासनलाई अत्यन्त सुदृढ बनाएका छौं । साथै बीमा समितिको निर्देशनलाई पालना गर्दै ऐनकानूनको अधीनमा रहेर काम गर्दै आएका पनि छौं । जसले गर्दा अहिले अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगाउनुपर्ने अवस्था थिएन । संस्थागत सुशासन सुदृढ हुँदाहुँदै पनि अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगाउँदा हामीमाथि अन्याय भएको महसूस गरेका छौं । यसले कम्पनीलाई आर्थिक, भौतिक र नैतिक हिसाबमा नोक्सानी भएको छ ।
अग्नि बीमा कारोबार रोकिने डरले सर्वाेच्चमा उजुरी पनि गर्नु भयो, तैपनि बीमा समितिले अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगायो । अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सुधार गर्न भनेका कुराहरू हामीले सुधार गरिसकेका छौं । अदालतको फैसलाले हामीलाई अन्याय भएको छ, यो दोहो¥याइपाऊँ भनेर उजुरी गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो । त्यसकारण हामीले सर्वाेच्चमा उजुरी दिएका हौं । सर्वोच्चले हाम्रो बारेमा फैसला ग¥यो भने ठीकै छ । यदि भएन भने नियामक निकाय भएकाले बीमा समितिलाई हामीले विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने हुन्छ । बीमा समितिको निर्देशनअनुसार सीजी ग्रूपलाई बढी दिएको दाबी भुक्तानी फिर्ता मागिसकेका छौं र संस्थागत सुशासनमा भएको परिवर्तनको बारेमा पनि समितिलाई जानकारी दिएका छौं । अग्नि बीमा कारोबार फुकुवा गर्न निवेदन पनि दिइसकेका छौं । यदि सर्वाेच्च अदालतबाट हाम्रो पक्षमा फैसला भएन भने बीमा समितिबाट नै समस्याको समाधान खोज्ने तयारीमा छौं । समितिले २०७१मा देखाएका कमजोरीहरू अहिले छैनन् । सुधार गर्दै विकसित रूपमा अगाडि बढेका छौं । जसअनुसार समितिले छिटै नै अग्नि बीमा कारोबार सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेछ । हामी भएका समस्यालाई समाधान र सुधार गर्दै कम्पनीलाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढ्छौं ।
कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गर्दै छ । बीमा समितिको यो कारबाहीले कम्पनीको शेयर विक्रीमा असर गर्ला कि ?
बीमा कारोबार बन्द हुनु र हकप्रद शेयर जारी गर्ने फरक विषय हुन् । यद्यपि, कम्पनीको प्रतिष्ठामा केही आँच आउने भएकाले शेयर विक्रीमा केही समस्या आउन सक्छन् । तर, अग्नि बीमा कारोबारमा रोक क्षणिक समयको लागि हो । वस्तुनिष्ठ रूपमा समितिलाई सन्तुष्ट पार्न सकियो भने अग्नि बीमा कारोबार छिटै सञ्चालनमा आउँछ । त्यसैले शेयर विक्रीमा यस घटनाले कुनै असर नगर्ने हाम्रो आकलन छ ।
बीमा समितिले कम्पनीको संस्थागत सुशासन चित्तबुझ्दो नभएको बताएको छ । स्थिति कस्तो हो ? कसरी सुधार्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
हामीले ठीक छ भन्छौं । तर, अर्काेले ठीक छैन भन्छ । विवाद आउने कारण नै यिनै हुन् । हाम्रोमा भएको पनि यही हो । संस्थागत सुशासनमा सुधार आउँदा आउँदै पनि सम्बन्धित निकायलाई विश्वस्त पार्न सकिएको छैन । कुनै पनि कुरा कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन । हामी सधैं सिकाइ र सुधारको बाटोमा हुन्छौं । तत्कालीन समयमा संस्थागत सुशासनमा केही कमी कमजोरी थिए । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ बनाएका छौं ।
झूठो बीमा दाबी प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ?
झूठो बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति छ भन्ने सत्य नै हो । यो समग्र बीमा क्षेत्रका लागि समस्याको विषय बनेको छ । यो आजको मात्र नभएर पुरानो समस्या नै हो । यसले समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको छ । तसर्थ यो समस्यालाई समाधान गर्न बीमा समिति र कम्पनीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । यसलाई समाधान गर्न दाबी प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । साथै कम्पनीले पनि बलियो रूपमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । बीमा समिति तथा कम्पनीहरू समेतको सामूहिक प्रयत्नले मात्र यसको समाधान सम्भव छ । कुनै पनि बेला सर्भेयरले बीमितको मिलेमतोमा झूठो प्रतिवेदन बनाउन सक्छ । त्यस्तो देखिएमा सर्भेयरलाई बोलाएर जाँचबुझ गर्छाैं । त्यसमा यो गल्ती भयो यो ठीक छ भनेर स्पष्टीकरण दिएको आधारमा हामीले दाबी भुक्तानी दिन्छौं । यस्तै, बलियो नियम कानून नभएर पनि यस्तो समस्या मौलाएको छ । प्रचलित नियम कानूनहरूलाई परिमार्जन गरेर प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, यसले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू खलनायकको रूपमा देखिएका छन् । कुनै शङ्कास्पद विषयमा छानबिन गर्दा दाबी भुक्तानीमा ढिलो हुन सक्छ । त्यसमा जानी जानी ढिला ग¥यो भनेर हल्ला गरिन्छ । विभिन्न खालका आक्षेपहरू आउने गरेका छन् । तसर्थ यस्ता समस्याको समाधानका लागि बलियो ऐन कानून बनाउनु पर्छ ।
बीमा कम्पनीले अपनाउने दाबी भुक्तानी पारदर्शी हुँदैनन् भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
बीमित सम्पत्तिमा कुनै कारणवश नोक्सानी भएमा सर्वप्रथम सम्बन्धित कम्पनीमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको आधारमा कम्पनीले सर्भेयर खटाउँछ । त्यो कुराको जानकारी बीमितलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ । यो यो डकुमेण्ट आवश्यक पर्छ भनेर जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सर्भेयर गएर क्षति भएको प्रारम्भिक छानबिन गर्छन्, सोहीअनुसार बीमितलाई मर्मत गर्न भन्छन् । मर्मत गर्दाको बिल र सर्भेयरले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने हो । प्रक्रियागत रूपमा दाबी प्रक्रिया पारदर्शी नै हुन्छ । मोटर बीमाको हकमा भने बीमितले कम्पनीलाई सूचना दिए पनि सर्भेयर नजाँदै मर्मत गर्ने हुन्छ । यस्ता कारणले भने समस्या देखिएको छ । भुक्तानीको विषयमा कम्पनीले क्षतिको पूर्ति मात्र गर्ने हो । अर्थात् गाडी बनाउँदा लागेको खर्च हामीले दिने हो । गाडी बिग्रेको आधारमा पैसा दिन मिल्दैन । साथै, कम्पनीले केको रक्षावरण गरेको छ भनेर पोलिसीमा लेखिएको हुन्छ । त्यसमा सबै भर पर्छ ।
अग्नि बीमा कारोबारमा लागेको यो रोक र बढ्दो प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा कम्पनीलाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
कम्पनीले प्रगतिमा जुन गति लिएको थियो । त्यसमा अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लाग्दा केही समस्या आएको छ नै । यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउन केही समय लाग्छ । साथै, यसको असर कालान्तरसम्म पनि हुन्छ । यो कम्पनीको लागि दुःखद पक्ष हो । बढ्दो प्रतिस्पर्धाको बजारमा यसले हामीलाई केही पछाडि पारेको छ । तर, अग्नि बीमा कारोबार रोकियो भनेर चुपचाप बस्ने समय छैन । अन्य बीमा कारोबारलाई बलियो रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ । साथै, आन्तरिक कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने हाम्रो योजना छ । बीमा समितिलाई छिटै विश्वास दिलाई अग्नि बीमा कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीको तयारी छ र फुक्का गर्न आधारभूत प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका छौं । यो भन्दा अरू उत्तम उपाय पनि छैन । यसैबाट समस्याको समाधान गरी बजारमा अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं । साथै, हामीले असार मसान्तसम्म रू. १ अर्बको चुँक्तापुँजी पुर्‍याउनु पनि छ । त्यसकारण यो समय हाम्रो लागि अत्यन्त संवेदनशील छ ।
तपाईंको कम्पनीले बीमितलाई के कस्ता सुविधाहरू दिएको छ ? नयाँ सुविधाहरू ल्याउने तयारी के छ ?
ग्राहकका लागि राम्रो सुविधा नै छिटो र सहज तरीकाले दाबी भुक्तानी दिनु हो । बीमा गर्न आउने मानिसलाई सहजरूपमा बीमा पोलिसीहरू बेच्नु हो । मुख्यतः यी दुई कुरा नै ग्राहकका लागि आवश्यक सुविधा हुन् । त्यसैले हामीले प्रत्येक शाखामा कुनै पनि व्यक्ति बीमा गर्न आएमा आधा घण्टामा बीमा पोलिसी लिएर फर्कने व्यवस्था गरेका छौं । साथै, मोबाइल म्यासेजमार्फत प्रस्ताव प्राप्त भएको, पोलिसी जारी भएको, दाबी परेको, सर्भेयर खटेको, दाबी स्वीकृति भएको जानकारी गराउँछौं । म्यासेजमार्फत नै ‘भुक्तानी लिन आउनुस्’ भनेर सूचना दिने सुविधाहरू पनि बीमितलाई दिँदै आएका छौं । साथै, आउँदा दिनमा प्रविधियुक्त थप सुविधाहरू ल्याउने हाम्रो तयारी छ । जसमा अब हामी १ महीनाभित्र आफ्नै एप्स सार्वजनिक गर्दै छौं । त्यसमा आफ्नो मोबाइलबाट नै पोलिसी जारी गराउन सकिन्छ । यो सुविधा नेपालको बीमा बजारमा फरक हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।
अन द स्पट भुक्तानी दिनेलगायतका सुविधा पनि ग्राहकले खोजिरहेका छन् । युनाइटेडले यसमा के गर्दै छ ?
बीमितलाई छिटो र सहजरूपमा भुत्तानी दिनु महŒवपूर्ण कुरा हो । निश्चित रकमसम्म दाबीमा हामीले सर्भेयरको प्रतिवेदनविना नै भुक्तानी दिने गरेका छौं ।
कम्पनीका भावी योजनाहरू केके छन् ?
बाली तथा पशुपक्षी बीमालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने कम्पनीको योजना छ । अहिले अछाम, बाजुरा र हुम्ला युनाइटेडको जिम्मामा छ । त्यहाँको सम्पर्क र शाखा कार्यालयमार्फत बाली तथा पशुपक्षी बीमालाई बलियो रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ । साथै, अन्य जिल्लामा पनि शाखा विस्तार गरी बीमाको सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ । बीमाको पहुँच बढाउन शाखा विस्तार गर्ने पनि हाम्रो योजना छ । यसको लागि हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका पनि छौं । साथै, बीमा पोलीसी जारी गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजना छ । मुख्यतः अग्नि बीमामा रोक ल्याउनाले कम्पनी अहिले ठूलो समस्यामा छ । यो समस्याको समाधान गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ । यो समाधान भएपछि हामी बजारमा नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौं ।
बीमा बजारका चुनौतीहरू केके देख्नु भएको छ ?
कम्पनीहरू आम ग्राहकमाझ पुग्न नसक्नु नै बीमाक्षेत्रको चुनौती हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण बीमा सेवालाई विस्तार गर्न सकिएको छैन । त्यस्ता ठाउँमा खर्च बढी लाग्ने हुनाले कम्पनीहरूले चाहेर पनि शाखा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो बीमाक्षेत्रका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । जसले गर्दा दूरदराजका सर्वसाधारणहरू बीमा सेवादेखि वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै, बीमाक्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको पनि समस्या छ । बीमाक्षेत्रका लागि सक्षम र व्यावसायिक अभिकर्ताको अभाव हुँदै गएको छ । कर्मचारीहरू बढी तलब सुविधा खोज्दै छोटो समयमा नै अर्काे कम्पनीमा जाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । भोलिका दिनमा यसले बीमा बजारमा समस्या ल्याउन सक्छ ।
जेजती जवाफ आएका छन ती सबै एक हिसाबले ठिकै हो। तेइ हिसाबले जानै पर्छ अनि गर्नै पर्छ। हामी पनि कम्पनिका सुभचिन्तक नै हौ। तर जब सम्म कम्पनिका माथिका कर्मचारी देखि तल सम्मका कर्मचारिहरुको स्वभाव बदल्दैन तब सम्म केइ हुनेवाला छैन। ब्याबस्थापन्ले कर्मठ कर्मचारिहरुको मनोबल लाई उच्च सम्मान गर्न लाई कन्जुसियाइ गर्छ तब सम्म यश कम्पनी ले चाडै प्रतिफल ल्याउन गाह्रो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अन्तमा आगामी दिनको सफल्ताको कामना गर्दछु। सेवारो